तिथि मेरो पत्रु »3एक अद्भुत वैवाहिक लागि सुझाव
सम्बन्ध हामीले पाउन सबैभन्दा अविश्वसनीय कुरा हो. तर जीवन मा सबै महत्त्वपूर्ण कुराहरू जस्तै तिनीहरूले काम को एक धेरै आवश्यकता. हामी हाम्रो सुन्दर संघ कायम गर्न निश्चित काम गर्नु पर्छ. तर राम्रो कुरा केही सरल परिवर्तन संग हामी र हामी प्रेम एक बीच राम्रो र सबै भन्दा महत्वपूर्ण एक आनन्दित संघ सुनिश्चित गर्न सक्छन् कि छ. यहाँ एक ठूलो सम्बन्ध कायम मदत गर्न बस एक तीन सुझाव छ:
संचार कुनै पनि सम्बन्ध महत्वपूर्ण छ. कुरा र आफ्नो पार्टनर संग खुला हुन. तपाईं सबै पछि आफ्नो साथी संग खुला हुन सक्दैन भने कसले तपाईं संग खुला हुन सक्छ? तिनीहरूलाई तपाईं महसुस थाह दिनुहोस्, तथापि अलोकप्रिय तपाईं हुन सक्छ महसुस कसरी, र तिनीहरूलाई त्यहाँबाट जान अनुमति. तपाईं के गर्न सक्नुहुन्छ नराम्रो कुरा पूर्णतया तपाईं वर्ष पहिले भनेका छन् गर्नुपर्छ कुरा भन्दा विस्फोट लाइन तल फिर्ता र त्यसपछि कुराहरू वर्ष राखन छ. कसैले साँच्चै माया भने तिनीहरूले तपाईं संग सबै माध्यम ले काम छौँ, तिनीहरूलाई समय लिन्छ भने. इमानदार हुनुहोस् र अन्ततः तपाईं अगाडी अलग सट्टा नजिक बढ्नेछ.
कुराहरू बलियो जाँदै यौन साइड राख्नुहोस्
तपाईं प्रत्येक अन्य को पर्याप्त प्राप्त गर्न सकेनौं जब एक समयपछि सम्बन्ध यौन पक्ष पहिले दिन देखि क्षीण सुरु गर्न सक्नुहुन्छ. बस आफ्नो बनाउन-माथि एक निश्चित तरिका गरेर तपाईं धेरै अझै पनि सेक्सी अंडरवियर वा खरीद गरेर एक यौन भइरहेका आफ्नो प्रेमी देखाउन. लाल ओठ. धुवाँ आँखा. तिनीहरूले अझै पनि यो सबै तल किनभने तिनीहरूलाई अझै पनि तपाईं चाहनुहुन्छ बनाउन.
म मान्छे तपाईं तिनीहरूलाई गहिरो राख्न मतलब व्यवहार गर्न आवश्यक भन्न जहाँ धेरै डेटिङ लेख पढ्न छन्. यो मलाई यति गलत देखिन्छ. आखिर, कुरा मानिसहरूले के छ भन्दा उनि लागि देख रहे भन्न? हँस्सी सँगसँगै, दयालु देखिन्छ व्यक्तिलाई सबैभन्दा लोकप्रिय जवाफ हुन. अनि कहिलेकाहीं म कि डेटिंग पूल गलत के छ विचार. यस मुकुण्डो मा डाल पनि धेरै मान्छे एक doormat जस्तै देख आफूलाई रोक्न त्यहाँ छ. भएका प्रकारको कमजोर भएको रूपमा वास्तवमा यो आफ्नो बलियो उपकरण छ जहाँ यो सम्बन्धमा आउँदा खराब प्रतिनिधि मिल्यो देखिन्छ. कोमल छ जो आउँछ जो न्यानोपन, दयालु र जो तपाईंलाई थाहा छ outdone सकिँदैन आफ्नो हित लागि छ. त्यसैले आफ्नो साथी दयालु हुन र तिनीहरूले दयालु प्रतिक्रिया हुनेछ. तिनीहरूले त छैन भने तिनीहरूले आफ्नो समय मूल्य छैन. कुनै र प्रेम आफ्नो ढोकामा पुग्नेछौँ र तपाईंले कहिल्यै यो कहिल्यै हुन सक्छ कल्पना भन्दा यो अझ राम्रो हुनेछ लागि भइरहेको सभ्य मानव भएको सम्झौता नगर्नुहोस्.